ITZY အဖွဲ့ဟာ လတ်တလောမှာ loco album နဲ့ comeback လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ သီချင်းသစ်ကို promotion ဆင်းဖို့ music bank မှာ ဖျော်ဖြေဖို့ 24 ရက်နေ့က သွားခဲ့ပါတယ်။ ထိုနေ့က Yuna ဝတ်လာတဲ့ ဝတ်စုံလေးဟာ အမည်းရောင် leather ကိုယ်ကျပ် ဂါဝန်အတိုလေးပါ။
နည်းနည်းကြောင်တောင်တောင်နိုင်တဲ့ stocking ဝတ်ပြီး အနီနဲ့ အမည်းစပ် boot အရှည်ကြောင့် Yuna ရဲ့ fashion ဟာ လူပြောစရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Yuna ဟာ အသက် ၁၇ နှစ်ဘဲရှိသေးတာကြောင့် ဒီလို ခပ် hot hot ဝတ်စုံကိုဝတ်လာတာဟာ k netizen တွေကို shock ရစေခဲ့ပါတယ်။ ထိုပုံတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး ခုလို comment တွေ ပလူပျံခဲ့ပါတယ်။
“ဒါကတကယ်ဆိုလှတောင်မလှပါဖူး… အသက်ငယ်သေးတဲ့ member အတွက် ဒီ outfit ဟာ အရမ်း over ဖြစ်လွန်းတယ်” “သူမ outfit က တရားလွန်ဖြစ်နေတာပါဟယ်” “သူမက ခုမှ ကလေးဘဲရှိသေးတာလေ ဒါပေမဲ့ ဝတ်စုံကြီးက လွန်းလွန်တယ်” “သူမအတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ်.. ဒီလိုဝတ်စုံမျိုးကို အသက်မပြည့်တဲ့သူအတွက် ဝတ်ခိုင်းစရာလား” “သူတို့ အဖွဲ့ရဲ့ stylist ကို ပြောင်းဖို့လိုနေပြီ” “သူမက အသက်ငယ်သေးတယ်မလား?? သူတို့ အေဂျင်စီက ရူးနေတာလား??
“ဝတ်စုံလေးဘဲ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ လှပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ stocking က လုံးဝမလှဖူး။ stocking ဖြဲထားတဲ့ ဒီဇိုင်းရော၊ အနီရောင် ဖဲပြားရော၊ ဖိနပ် boot ရော သူမနဲ့ မလိုက်ဖူး။ အရပ်ပုသွားသလို ဖြစ်သွားတယ်” “Omg so corny” “သူမက Harley Quinn နဲ့ တူတယ်” “ခုတလော JYP က ဘာတွေဖြစ်နေတာလည်း”
K idol တွေကတော့ stylist တွေ ဆင်တဲ့အတိုင်း ဝတ်ရပြီး သူတို့ MV ရဲ့ concept နဲ့ လိုက်အောင် ဝတ်ရတာပါ။ ဒါကြောင့် K idol တွေမှာ အပြစ်တော့မရှိပါဖူး။ Stylist က အသက်ငယ်သေးတဲ့ Idol ကို ခုလိုဆင်မိတဲ့ အတွက် ဝေဖန်သံတွေထွက်လာတာလို့ မင်မင်ကတော့ ထင်မြင်မိပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရော ဒီကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး ဘယ်လို မြင်မိပါသလည်း ပြောပြသွားကြပါအုံးနော်။
Next ရည်းစားဟောင်းနဲ့ ပြတ်တဲ့အထိ ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်အား ပြောပြခဲ့သူ Ji Chang Wook »
Previous « K-Pop Idol ​တွေနဲ့ အ​နောက်တိုင်း အနုပညာရှင်​တွေကြားက အထင်ကရအဖြစ်ဆုံး Collaboration (၅) ခု
2021 Thai TV3 မှ Instagram Follower အများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီး (၁၀) ဦး
Jin နဲ့ friendship အ​ကြောင်းကို ​ပြောပြရင်း BTS ဟာ ကိုရီးယားရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခါပါလို့ ချီးမွမ်းလိုက်တဲ့ Ji Seok Jin
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ​ကျောင်းတက်ပြီး ပညာ​လေ့လာ​သင်ယူခဲ့ကြဖူးတဲ့ ကိုရီးယားမင်းသားမင်းသမီး (၇) ဦး